Ny fanafahana no fitsipika, fa efa fanapahan-kevitra miavaka kosa ny fampidirana am-ponja vonjimaika - Nanome toky an'ireo mpitsara ny ministra Randrianasolo Jacques - Ao Raha du 10 avril 2019 - RANARISON Tsilavo - La justice à Madagascar est considérée comme très corrompue à Madagascar -
Home Le magistrat se cache derrière un ordre venu d'en haut Ny fanafahana no fitsipika, fa efa fanapahan-kevitra miavaka kosa ny fampidirana am-ponja...
Ny fanafahana no fitsipika, fa efa fanapahan-kevitra miavaka kosa ny fampidirana am-ponja vonjimaika – Nanome toky an’ireo mpitsara ny ministra Randrianasolo Jacques – Ao Raha du 10 avril 2019
Ny fanafahana no fitsipika, fa efa fanapahan-kevitra miavaka kosa ny fampidirana am-ponja vonjimaika. Lasa niteraka olana eo amin’ny famoahana didim- pitsarana anefa ny raharaha mikasika ny fanasaziana an’ireo mpitsara efatra tao Toamasina, izay nanome fahafahana vonjimaika an’ilay olona voarohirohy tamin’ny fakàna an-keriny.
Notsorin’ny minisitry ny Fitsarana, Randrianasolo Jacques fa: «lasa matahotra fahatany fanasaziana ireo mpitsara mamoaka didy ankehitriny noho io zava-nisy io, hany ka miditra am-ponja vonjimaika ny ankamaroan’ireo voarohirohy amin’izao fotoana izao. Tokony hijery an’ireo vesatra iampangana an’ireo olona tsaraina anefa izy ireo», hoy izy, omaly, nandritra ny fanokafana ny fampiofanana an’ireo Tonian’ny mpampanoa lalàna, tetsy amin’ny Sekolim-pirenena fanofanana mpitsara sy mpiraki-draharaha, tetsy Tsaralalàna (Enmg).
Nisy ny hafatra nalefany. « Aoka tsy hihaino be fahatany ny fanapahan-kevitry ny mpanatanteraka ianareo. Tokony ho hafainganina ihany koa ny fangatahana fahafahana misy fepetra ho an’ireo izay voafonja mangataka izany ka hitan’ny lehiben’ny fonja fa tokony hisitraka izany », hoy Randrianasolo Jacques, minisitry ny Fitsarana nanoloana ireo lehiben’ny Fampanoavana rehetra.
Nivoitra nandritra izao fampiofanana izao ihany koa ny fampiasana solosaina hanatsarana ny fomba fiasa eo anivon’ireo rantsam-pitsarana eto Madagasikara. «Hisy ny fanomezana toromarika an’ireo Fitsarana manerana ny faritra. Fomba fiasa vaovao no hampiharina amin’izao vaninandro maoderina izao», hoy hatrany ny minisitry ny fitsarana.
Previous articleDétention préventive d’employés des domaines – Le ministère répond aux syndicats – La vérité du 9 avril 2019
Next articleAza mba voany mankany amin’ny fitsarana fa mandeha ho azy ny fandefasana am-ponja vonjimaika ny voampanga – Ao Raha du 10 avril 2019
Tandremo! Toy ny mandeha ho azy, hono, raha ny filazan’ny minisitry ny Fitsarana, ny fandefasana am-ponja vonjimaika ny voampanga iray amin’izao fotoana izao raha...
SMM – Tsy mbola manana fahaleovan-tena ny fitsarana satria ny minisitry ny Fitsarana Jacques Randrianasolo no milaza fa tsy azo avoaka ny mpanao “kidnapping”...
A Madagascar le Ministre de la Justice peut influencer le cours de la justice - 5 avril 2019 0
Nanambara ny heviny omaly alakamisy faha 04 aprily 2019 ingahy Clément Jaona izay filohan’ny sendikan’ny mpitsara Malagasy eto Madagasikara (SMM) mahakasika ny raharaha nampiatoana...